Fampielezan-kevitra :: Feno fanahiana ny Kmf/Cnoe, mihetsika koa ny prefektiora • AoRaha
Fampielezan-kevitra Feno fanahiana ny Kmf/Cnoe, mihetsika koa ny prefektiora
Gaborakaka. Mitohy ny fanahiana avy amin’ireo mpanara-maso ny fifidianana manoloana ny mety ho korontana hitranga amin’ izao fanombohan’ny fampielezan-kevitra amin’ ny fifidianana solombavambahoaka hatao amin’ny 27 mey 2019 izao. Namoaka fanambaràna miantso an’ireo kandidà « mba hifanaja sy tsy hifanaratsy, fa kosa hanaja an’ireo lalàm-pifidianana » ny Komity mpanara- maso ny fifidianana sy ny fanabeazana olom-pirenena (Kmf/Cnoe), omaly. Nilaza ny fampitandremana an’ireo kandidà mihoa-pefy ihany koa ny Prefektioran’Antananarivo renivohitra.
Mampahatsiahy ireo mpikambana ao anatin’ny Kmf/Cnoe fa : « voararan’ny lalàna ny fampiasana ny fahefam-panjakana amin’ny fampielezan-kevitra ». Nanainga an’ireo tompon’ andraikitra samihafa miahy ny fanatanterahana ny fifidi- anana ity komity mba handray fepetra manoloana an’ireo fihoaram-pefy hataon’ireo kandidà. « Tanjona ny mba hisian’ny fitoniana mandritra izao fampielezan-kevitra izao », hoy ny ampahan’ny fanambaràna navoakan’ny Kmf/Cnoe.
Nampitandrina an’ireo kandidà solombavambahoaka manao fampielezan-kevitra tsy nahazoana alalana manokana ny « Préfet de police » an’ Antananarivo renivohitra, Jeneraly Ravelonarivo Angelo. « Efa misy ny fiaraha-miasa akaiky miaraka amin’ny Ceni, amin’ ny fanaraha-maso ireo kandidà mihoa-pefy ireo. Hisy ny fitondrana porofo sy fitoriana hatao amin’izany », hoy izy.
Fampihavanam-pirenena Nasiaka tamin’ireo mpanao politika ny FFKM
Kitra – « M’Foot Fokontany » :: Teratany italianina sy portigey ireo hitily mpilalao mahay eto amintsika